झक्कु सुबेदी डिस्चार्ज, अस्पतालकै खाटमा लिपुलेखको चिन्ता ! - Kantipath.com
झक्कु सुबेदी डिस्चार्ज, अस्पतालकै खाटमा लिपुलेखको चिन्ता !
हृदयघात भएर नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका नेकपाका नेता तथा पूर्व सभासद झक्कु प्रसाद सुबेदी डिस्चार्ज भएका छन् ! उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र डाक्टरले घरमै आराम गर्न सल्लाह दिएका छन् ! सोमबार बिहान काठमाडौँबाट दाङ्ग जाने क्रममा नागढुंगा नपुग्दै गाडीमै बेहोस भएपछी उनलाई नर्भिक हस्पिटल लगिएको थियो , हृदयघात भएर नर्भिक पुर्याइएका सुवेदीको डाक्टर जेपी जैसवालले सर्जरी गरेका थिए । सरकारद्वारा प्रतिवन्धित नेकपा विप्लवका रोल्पा इन्चार्ज रहेका आफ्ना छोरा सन्तोष सुवेदी ‘प्रयास’लाई प्रहरीले पक्रिएपछि उनलाई भेट्न दाङ जाने क्रममा सुवेदीलाई हृदयघात भएको श्रोतले जनाएको छ ।
सुरुवाती दिनमा शिक्षण पेशामा लागेका सुबेदी रोल्पाली जनताका बिचमा निकै लोकप्रिय छन् ! रोल्पा जिल्ला विकास समितिको तत्कालीन अध्यक्ष सुवेदीलाई राज्यले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई मार्च २६, १९९८ मा रिहा गरिएको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार सुबेदीलाई बन्दी बनाएर चरम यातना दिईएको थियो । तत्कालिन माओवादीभित्र सुबेदी संसदिय राजनीतिमा पाका नेता मानिन्छन ! उनि नोभेम्बर २००१ मा एकीकृत क्रान्तिकारी जनपरिषदको सदस्य बने, जुन माओवादीद्वारा स्थापित पूर्व-सरकार संरचना हो ।
झक्कु सुवेदी त्यस्ता नेता हुन् जसले तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमालेका बाहालवाला महासचिव रहेका माधव नेपाललाई २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं २ बाट पराजित गरिदिएका थिए । त्यसपछि झक्कु सुवेदीको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चा भएको थियो । चुनाब मा पराजय बेहोरेपछि माधब नेपाल ले नैतिकता को आधार मा भन्दै पार्टी महासचिब पद बाट राजिनामा दिएका थिए ! यद्यपि, अहिले दुबैजना नेता तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर बनेको नेकपामा नै आवद्ध छन् । सुवेदी हालको नेकपाका केन्द्रिय सम्पर्क मञ्चका सहइन्चार्ज हुन् ।
उनको स्वास्थ्य अबस्थाको जानकारी लिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपाका बरिस्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल, तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्याधिश खिलराज रेग्मी, पूर्व गृहमन्त्रि जनार्दन शर्मा, पूर्व मन्त्रि लेखराज भट्ट, पूर्व मन्त्रि पम्फा भुसाल लगायत नेता कार्यकर्ता नेता सुवेदीको स्वास्थ्य अवस्था बुझन अस्पताल पुगेका थिए ।
अस्पताल को शैयामा पल्टिरहेपनि उनि देशमा बिकशित राजनीतिक घटनाक्रम प्रति जानकार छन् ! नेपालको लिपुलेख, कालापानी लगायतको क्षेत्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सार्बजनिक गरे पछि उनि रुस्ट बनेका थिए ! भारत ले आफ्नो गल्ति अबिलम्ब स्वीकार गर्दै नेपाली जनतासामु माफी माग्नु पर्ने उनको धारणा छ ! उनले अस्पतालमा रहंदा आफ्ना सहयोगी मार्फत जानकारी लिने गरेका थिए ! सुबेदीले आफुलाई पूर्ण रुपमा निको हुन केहि समय लाग्ने र स्वास्थ्य लाभ को कामना गर्ने सबैलाई धन्यबाद दिएका छन् !
Previous Previous post: मन्दिरमा भगवानलाई मास्क !
Next Next post: कान्तिपथ हाईलाईट : अहिले सम्मका मुख्य समाचार
पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषदमा सामान्य हेरफेर, नेपाल समूह असन्तुष्ट
अब जेलभित्रै यौन सम्पर्क गर्न पाउने